Yaa Ku guuleysan doona xilka Madaxweyne 25ka musharax ( hadal heeynta reer Muqdisho) | HobyoNet.Com
Thursday, September 6th, 2012 | Posted by Hnet
Yaa Ku guuleysan doona xilka Madaxweyne 25ka musharax ( hadal heeynta reer Muqdisho)
MUQDISHO-HOBYONET)Waxaa gelinkii danbe ee maanta Ku ekaa qabashada araajida musharixiinta xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya iyadoo ilaa 25 musharax ay soo buuxiyeen shuruudaha laga doonayey.
Gudiga qabashada araajida doorashada ee baarlamaanka Ayaa shaaciyey in berito iyo maalinta xigta oo 8da bisha Ku beegan la dhegeysan doono qudbadaha musharixiinta si ay golaha baarlamaanka ugu soo bsndhigaan qorshahiisa Ku aadan wax qabadka hadii uu xilka Ku guuleysto, waxaana beri gelinka danbe la qorsheeyey ilaa 10 musharax
Iney baarlamaanka hor tagaan, tirada harteyna maalinta xigta la dhegeysto qudbadooda waxaana 9ka bisha Ku eg ololaha musharaxa.
Dadweynaha reer muqdisho Ayaa siyaabo kala duwan Uga hadlaya doorashada Madaxweynenimo ee dhaceysa Isniinta iyadoo saadaalo is diidan la kala bixinayo.
Siyaasiyiinta qaar Ayaa qaba in mar kale xilka uu Ku guuleysan karo Madaxweynaha talada hayey ee Sh.shariif maadama uu kalsooni badani Ku leeyahay golaha cusub sida la leelayahay.
Hase yeeshee waxaa jira fikrado kale oo Ku adkeysanaya inuu shariifku weynayo oo xilka uu heli karo Baadiyoow ama Farmaajo, oo shacbiyada caadiga ah ee muqdisho taagersanyihhin hadii iyaga la weydiiyo rabitaankooda.
Musharixiinta qaar ayey dadku aaminsanyihiin iney boos celis ay ka tahay oo aysan rajo ka qabin xilka,laakiin ay gorgortan Ku geleyaan tirada cod ee ay helaan si jagooyin looga siiyo xukuumada cusub ee la dhisi doono.
Hadalheynta ugu badan ee ay reer muqdisho Ku qaxweeyaan Ayaa ah in KAMA danbeysta ay tegi karaan ilaa 5 ama 6 musharax oo kala ah Shariif sh.Axmed, Gaas,Farmaajo, Caddow, iyo baadiyow.
La arki doonee cida Isniinta soo socota ee 10ka sebtember Ku guuleysata xilka hogaamineed ee dalka Soomaaliya mudada 4ta sano ee soo socota.
By Tifaftiraha hobyonet